Isiraely: vaovao farany momba ireo takalon’aina jiosy any Mumbai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2008 21:58 GMT
Tsy dia fantatra loatra hatramin'izao ny manjo ireo takalon'aina nandritra ny fanafihana ny Ivotoerana Jiosy Chabad ao Mumbai. Chabad moa dia iray amin'ireo antokom-pinoana jiosy Ôrthôdôksa Hasidika mipariaka indrindra. Miahy ivotoerana anarivony manerantany izy, manampy ny ivontoerana jiosy, synagoga ary sekoly – manolotra asam-panabeazana ho an'ny Jiosy manerantany. Malaza tokoa ry zareo ho an'ny Isiraeliana mpandehandeha, izay zatra mandeha any amin'ireny ivotoerana ireny rehefa mamita ny iraka ara-miaramila ataony.
Tsy mandeha noho ny fametrahana rindrambaiko napetrany manokana antsoina hoe Saturday Guard izay manakana ny mpampiasa azy tsy hahita na inona na inona ao mandritra ny andro Shabata moa ny vohikala'ny Chabad. Na izany aza dia azo jerena ao amin'ny vohikala fitaratrany ny vaovao farany mikasika izany. Ny vaovao tena farany indrindra re mikasika ireo takalon'aina jiosy dimy voatazona tao moa dia ny fahafatesan'izy ireo:
tamin'ny 06:22 – Niditra tao amin'ny trano mifanila amin'ny trano Chabad ny komandô iray. Mpampihorohoro iray no maty.
tamin'ny 07:01 – Mbola atao fahirano hatramin'izao ny trano Chabad.
tamin'ny 07:17 – Notaterin'ny CNN fa navotsotra avy ao amin'ny trano Chabad ny reny iray miaraka amin'ny zanany izay samy mitomany. Tsy mazava loatra raha ny fianakavian'ny Raby Holtzberg ireo na tsia.
tamin'ny 07:43 – notaterin'ny mpitandro ny filaminana fa dimy raha vitsy indrindra ny mpampihorohoro ao anatin'ny trano Chabad.
tamin'ny 08:05 – Tafatsoaka ny trano Chabad ny mpitondra teniny, ny raby Menahem Brod: vehivavy iray miaraka amin'ny zanany
tamin'ny 08:19 – Mpitaiza zaza ilay vehivavy tafatsoaka avy tao amin'ny trano Chabad niaraka tamin'ny zanaky ny Iraka. Mbola babo ao ry zareo.
tamin'ny 08:24 – Nantsoina hivavaka eny amin'ny rindrin'ny fitomaniana ao Jerosalema ho amin'ny fahaveloman'ny Iraka ny Chabad Hasidika
tamin'ny 08:34 – ny vavolombelona no niteny fa navotsotra ny zanaky ny Iraka sy ilay mpitaiza ny zaza. Fa mbola ao an-trano ihany ry zareo.
tamin'ny 08:36 – Radio Isiraeliana: nolazain'ilay vehivavy noafahana fa tsy mahatsiaro tena ny Iraka sy ny vadiny.
tamin'ny 08:55 – Radio Isiraeliana: nentina tany amin'ny paositry ny polisy ny zanaky ny Iraka sy ilay mpitaiza. Tsy mbola fantatra kosa ny manjo ny ray aman-dreniny.
tamin'ny 09:03 – ny renin'ny iraka ao amin'ny ynet: “Reko fa velona izy ireo”
tamin'ny 09:23 – Mpitandro ny filaminana Karana: mety ho efa lany bala ireo mpampihorohoro ireo.
tamin'ny 11:23 – vao heno nisy nipoapoaka tao an-trano Chabad tao. Heverina fa manafika ny toerana ny mpitandro ny filaminana.
tamin'ny 12:03 – Hotontosaina amin'ny telo ora tolakandro ny fiaraha-mivavaka ho an'ny takalon'aina eo amin'ny rindrin'ny fitomaniana.
tamin'ny 13:51 – Niangavy hisian'ny vavaka manerana an'Isiraely avy hatrany ny sampan'ny tanora ao amin'ny Chabad.
tamin'ny 14:31 – Mitady ny hisian'ny fifampiraharahana amin'ny fanafahana ny takalon'aina ao amin'ny trano Chabad ny mpampihorohoro.
tamin'ny 17:31 – Minisiteran'ny raharaham-bahiny: mampanahy fatratra ny ain'ireo takalon'aina ao amin'ny trano Chabad.
tamin'ny 19:44 – misy loharanom-baovao ambadika milaza navotsotra ny sasany amin'ireo takalon'aina.
tamin'ny 20:11 – Minisitry ny raharaham-bahiny Isiraeliana: “tsy misy fototra ahafaha-manamarina fa navotsotra ireo isiraeliana. Tsy Manam-baovao firy izahay ka mampanahy izany”
tamin'ny 21:41 – ilay mpitaiza niaraka tami'nny zanaky ny iraka tao amin'ny resadresaka manokana: “mitady ny ray aman-dreniny foana izy”
tamin'ny 23:00 – CNN-IBN: fipoahana miezinezina re avy tao amin'ny trano Chabad tao Mumbai.
tamin'ny 23:51 – nanambara ny minisitry ny raharaham-bahiny Isiraeliana fa na dia teo aza ny fiezahana hifampiresaka dia tsy mbola nisy ny takalon'aina navotsotra tao amin'ny Chabad tao Mumbai. Hanadihady miaraka amin'nympitondro ny filaminana ao Mumbai ny minisitera nyamin'izay antony fipoahana miezinezina tao an-trano. Ny tatitra vao haingana no nilaza fa nisy olona valo nitsoaka ny Chabad, ny loharanom-baovao diplaomatika kosa milaza fa avy amin'ny trano teo anilany ireo.
tamin'ny 01:35 – Niala ny tranony any Crown Heights (etazonia) hamonjy an'isiraely ny raby Nachman Holzberg sy ny vadiny. Ny fianakaviana: Mahare vaovao mifanohitra izahay.
tamin'ny 02:44 – CNN: fipoahana fahatelo re nandritra ny alina raha nisy “mananasy” natsipy avy tao amin'ny trano natoraka ny mpitandro ny filaminana Karana manodidina ny toerana.
tamin'ny 02:46 – efa an-dalana ny solontena Isiraeliana hanampy amin'ny famonjena ireo takalon'ana tavela ao amin'ny trano Chabad.
tamin'ny 03:47 – Nitifitra ny trano Chabad ny mpitandro ny filaminana Karana. Tsymazava hoe hiditra ny trano ve izy ireo.
tamin'ny 03:50 – masoivombaovao politika: Efatra ny maty ao amin'ny trano Chabad; Livni (lehiben'ny antoko Kadima): Matroka ny toe-draharaha.
tamin'ny 04:20 – feom-basy fifampitifirana tao an-trano Chabad.
tamin'ny 05:05 – nisy saina fotsy nitsangana tanyamin'nyrihana fahaefatry ny trano Chabad.
tamin'ny 06:46 – Mpitati-baoaon'ny NDTV eo anoloan'ny trano Chabad: lasa naharitra kokoa noho ny noheverina ny fanafihana satria voatazona mbola velona ny Raby sy ny vadiny.
tamin'ny 07:12 – Raby Grossman ao amin'ny televiziona Isiraeliana fantsona faharoa: Tonga any Mumbai ny ray aman-drenin'ny Iraka ary hikarakara ny zafikeliny izay hankalaza ny faharoa taonany androany.
tamin'ny 08:05 – manamboninahitra polisy aoamin'ny vaovaon'ny Sky: Misy takalon'aina dimy na enina mbola velona ao an-trano Chabad.
tamin'ny 08:41 – Fifampitifirana mavesabesatra tao an-trano Chabad. Hatreny ambony (angidim-by sa voromby) no anafihan'ny komandô.
tamin'ny 08:52 – tatitra avy any Mumbai: fipoahana 3 re teny akaikin'ny trano Chabad
tamin'ny 09:25 – Manamboninahitra Karana iray no maminavina fa mbola haharitra ora maromaro ny fanafihana.
tamin'ny 10:25 – Manamboninahitra Isiraeliana iray no miteny fa efa mihazo ny rihana itazonana ny Iraka ny vondro-tafika manokana izao.
tamin'ny 10:51 – TV Britanika Sky: fipoahana sy feom-basy re manodidina ny trano Chabad any Mumbai.
tamin'ny 10:52 – CNN India no mitatitra fa efa azo ny rihana fahadimy sy fahaefatry trano Chabad.
tamin'ny 11:33 – efa saiky voafehin'ny komandôn'ny mpitandro ny filaminana avokoa ny rihana rehetra. Heno manako hatrany kosa ny fipoahana baomba.
tamin'ny 12:10 – radio Isiraeliana: Milaza ny fampahalalam-baovao Karana fa mbola velona ny iraky ny Chabad ka tokony hitandrina fatratra ny hery mpitandrony filaminana.
tamin'ny 14:01 – Niteny tamin'ny mpanampy an-tsitrapo ny raby fa mahazoalalana hiasa amin'ity Shabata ity izy ireo, izay hanomboka ao anatin'ny 15 minitra izany any India.
tamin'ny 14:44 – Fipoahana miezinezina namotika tamin'ny ampahany ny trano Chabad. Polisy: mbola misy mpampihorohoro telo ao.
tamin'ny 14:55 – Hora-pifaliana teo akaikin'ny trano Chabad. CNN: voafehin'ny mpitandro ny filaminana ny mampihorohoro. Mbola tsy fantatra kosa ny manjo ny iraka sy ny vadiny.
tamin'ny 15:48 – hita faty tao an-trano Chabad ny dimy amin'ireo jiosy.
Fitantanam-pitondrana 5 andro izay
Misoatra jentilisa amin’ny dika kinga dia kinga
29 Novambra 2008, 00:04